Orinasa sy mpamatsy aluminium fosida China | Lemandou
Takelaka maintso-maitso na mavo
Votoatin'ny ALP, W / W,%
Ny lanjan'ireo takelaka tsirairay
Vovoka & takelaka tapaka
Izy io dia afaka manondraka voamaina, voamaina voadio, voamaina ary fitaovana fitehirizana isan-karazany
Izy io koa dia ampiasaina hamonoana bibikely amin'ny toerana mihidy hafa, loaka voalavo ary lava-lava
Inona no ilana fosida alimina?
Ny phoside aluminium dia ampiasaina ho toy ny fumigant hiarovana ny voa voatahiry amin'ny bibikely sy ny biby mpikiky. Manoloana ny hamandoana, ny phosidium aliminioma dia mamoaka phosphine, izay misy poizina be.
Ahoana ny fiasan'ny abamectin?
Raiso ohatra ny fanomanana 56%:
1. 3 ~ 8 silaka isaky ny taonina voamadinika na entana voatahiry, 2 ~ 5 silaka isaky ny metatra toratelo an'ny kaontenera na entana, sombina 1-4 isaky ny metatra toratelo an'ny habaka fanorana.
2. Rehefa vita ny setroka dia sokafy ny ridao na ny sarimihetsika plastika, sokafy ny varavarana sy ny varavarankely na ny vavahady fidiran'ny rivotra, ary makà rivotra voajanahary na mekanika hanaparitahana tanteraka ny rivotra sy hanala ireo entona misy poizina.
3. Rehefa miditra ao amin'ny trano fanatobiana entana, dia ampiasao taratasy fanandramana natsofoka rano 5% ka hatramin'ny 10% vahaolana nitrate volafotsy hijerena gazy misy poizina, ary hiditra raha tsy misy gazy phosphine.
4. Miankina amin'ny mari-pana sy ny hamandoana ny fotoan'ny fumigation. Etsy ambanin'ny 5 ℃, ny fumigation dia tsy mety, 5 ℃ ~ 9 ℃ tsy latsaky ny 14 andro; 10 ℃ ~ 16 ℃ tsy latsaky ny 7 andro, 16 ℃ ~ 25 ℃ tsy latsaky ny 4 andro, mihoatra ny 25 ℃, tsy latsaky ny 3 andro. Mifoka sy mamono voles, singa 1 ka hatramin'ny 2 isaky ny lavaky ny totozy.